people Nepal » प्रचण्डमाथि २६ बुँदे आरोप लगाउँदै लोकेन्द्र विष्टद्वारा पार्टी परित्याग, स्वतन्त्र भएको घोषणा ! प्रचण्डमाथि २६ बुँदे आरोप लगाउँदै लोकेन्द्र विष्टद्वारा पार्टी परित्याग, स्वतन्त्र भएको घोषणा ! – people Nepal
Posted on October 13, 2017 by Durga Panta
काठमाडौं । नेकपा माओवादीका प्रभावशाली नेता लोकेन्द्र विष्टले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका छन् । विष्टले आफू अब स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेका हुन् ।
अध्यक्ष ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनकाे (पूर्णपाठ)